Magaalada in IswiidhanTemplate:SHORTDESC:Magaalada in Iswiidhan
Stockholm is located in Earth
Stockholm waa caasimadda Iswiidhan. Xarun dhaqameed, siyaasad, dhexe iyo dhaqaale. magaalada Lorger badda bari ku taal soohdinta u dhaxaysa duck Dega Södermanland iyo Uppland. Magaaladii waa la shanaad ee waqooyiga Sami istater madax banaan lahayn dhadhan oo aan dunida, oo waa caasimada kaliya ee adduun ee la a park magaalooyinka qaranka. Stockholm waa ku Amray Sweden iyo magaalada gobolka Nordic ee ugu weyn ku nool yihiin 2015 qiyaasay IIaa 1.515.017 deggan.
bilaabmey Stockholm aasaasay 1187, sida ay natiijada Visby Franciscans The Book IIaa caasimada hore Kingdom SVEA ee, Sigtuna, dageen by Balts oo kale sanadkii. Dhaqan Dekedda badanaa Birger Jarl (oo ku saabsan 1210–1266) tirin aasaasaha magaalada 1252, hoos ilaalinta warqaddii convent Fogdö iyo Erikskrönikan. Dhow xagga woqooyi u ahayd tuulo yar, wooyinka, dhiganta Haymarket maanta. miciinka ee difaaca iyo dhibic ganacsi of view, meesha istaraatiijiga on Lake Mälaren qulqula badda bari, la xadeeyo gobollada Uppland iyo Södermanland, go'aansaday abuurka Stockholm iyo muhiimadda ay leedahay sii kordhaya. Degsiimada koray 1200s Hoos on Stadsholmen, Helgeandsholmen iyo Kidaskär, ka dib Gråbrödraholmen, maanta loo yaqaan Riddarholmen. iyo Gacan-ku-haynta dib-u Halkaan waxaad ka heleysaa Bogga internetka ee Awoowe 1260. Saalax kaniisad ku wareegsan 1260. Castle, Franciscan, klarissakloster iyo dominkankonvent dhisay, fadilay by ay ka mid yihiin Birger Jarl iyo King Magnus III (saabsan 1240–1290), iyo sidoo kale ka saaro derbiyada kadhacda magaalada.
Tan iyo markii ay magaalada dareemayso 1436, Stockholm waa kan ugu weyn oo ugu muhiimsan boqortooyada. Xaqiiqdii tahay waxay Sweden Management Center iyo tuudstad rasmiga ah. Waa in ay usha lagu noqoto bartamihii ka bartamihii ah 1634, markii qoyska, xukuumadda, baarlamaanka Bartamaha iyo rugförvaltning magaalada reer boqor IIaa.
Halkaan waxaad ka heleysaa Stockholm ah oo 30 000 oo qof oo ka bartamihii ah shirkadaha ganacsiga ee ku Yaal magaalada Stockholm, oo ah kuwa ugu Haboon ee musqusha yaqaan 'Mar jasiiradda-hodan, archipelagos isku xidhan.
Sanadkii 1998-dii, Degmada Warqadaha ilaa caasimada Europe ee dhaqanka. Sanadkii 2010, caasimada Yurub ee dhaqanka ayaa kori doona.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockholm&oldid=226184"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Diseembar 2021, marka ee eheed 03:11.